स्पेनिस वा स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड, तपाईले कुन प्रयोग गर्नु पर्छ? पत्ता लगाउनू! | म म्याकबाट हुँ
स्पेनिश वा स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड?
¿स्पेनिश किबोर्ड वा स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड? जब हामी एप्पल कम्प्युटर पहिलो पटक स्थापना गर्दछौं वा सुरू गर्दछौं, हामी एक विकल्प देख्छौं जुन हामीलाई सोधिएको छ यदि हामी कुञ्जीपाटी सजावट स्प्यानिश वा स्पेनिश आईएसओमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं भने।
तर यो के हो स्पेनिश आईएसओ? किन त्यहाँ एक भन्दा बढी छ? के तिनीहरू सबै एक समान हुनुहुन्न? हो होइन, तर हामीले भेट्न सक्ने समस्या यो होइन कि त्यहाँ सामान्य कुञ्जीपाटी लेआउटहरू छन्, तर यसको सट्टा हामी भन्न सक्छौं कि समस्या, यदि त्यहाँ एक हो भने, एप्पल हो।
एप्पललाई के समस्या छ? वास्तवमा यो होइन कि यसलाई समस्या भन्न सकिन्छ, तर तिनीहरूले परिवर्तन गरे जुन पछि हामीलाई प्रयोगकर्ताहरू अलमल्लमा पारे। त्यसोभए यदि एप्पलले परिवर्तन गरेको छ भने मैले के रोज्नु पर्छ: स्पेनी वा स्पेनिश आईएसओ? तार्किक रूपमा, यदि त्यहाँ दुई विकल्पहरू छन्, यो किनभने हामीलाई एक वा अर्को आवश्यक पर्दछ। यस लेखमा हामी वर्णन गर्नेछौं प्रत्येक किबोर्ड रूपरेखा के हो? र हामी मध्ये कुन कुन हामीले किबोर्डको प्रकारको आधारमा छनौट गर्नुपर्नेछ।
1 स्पेनिश वा स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड
1.1 स्पेनिश किबोर्ड
1.2 स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड
2 कसरी स्प्यानिश आईएसओ किबोर्ड कन्फिगर गर्ने
3 कसरी म्याक किबोर्डमा @ राख्ने
4 एक स्पर्श प्रतीक र लहजे
स्पेनिश वा स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड
हामीले कुन कन्फिगरेसन छनौट गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न हामी प्रत्येक केसमा भिन्नताहरू पूर्ण रूपले बुझ्न प्रत्येक केसलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्नेछौं।
दुई उपलब्ध स्पानिश विकल्प यो पुरानो एप्पल कीबोर्डहरूको लागि हो। छविमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, मैले के कुञ्जीहरू चिन्ह लगाएको छु जुन ठाउँमा छैन, जस्तै "C ब्रेडेड" (ç), प्रश्न चिन्हहरू, जोड चिन्ह र हाइफनहरू।
यदि तपाईं धेरै वर्ष पुरानो किबोर्ड प्रयोग गर्नुहुन्न भने, यति धेरै कि मलाई कुनै पनि हेरेको याद छैन (सायद यो नराम्रो स्मृति हो), तपाईंले अर्को विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ।
स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड
स्पेनिश आईएसओ वितरण विकल्प छ जुन हामीले छनौट गर्नुपर्दछ यदि हामीसँग एक टीम छ तुलनात्मक रूपमा आधुनिक। हेडर छविको किबोर्ड र ती सबै जुन हामी आज बिक्रीको लागि फेला पार्छौं स्पेनिश आईएसओ विकल्प प्रयोग गर्नका लागि तयार छन्। कुनै पनि अगाडि नजाँदा, मसँग म्याक छ जुन पहिले नै7बर्षको छ र "नयाँ" वितरणसँग उपयुक्त किबोर्डको साथ आयो।
कसरी स्प्यानिश आईएसओ किबोर्ड कन्फिगर गर्ने
मैले माथि भनेंं, मलाई छविको सजावटको साथ कुञ्जीपाटी हेरेको याद छैन, तर केहि पनि सम्भव छ। यदि यो केस हो जुन तपाईंसँग पुरानो किबोर्ड थियो र तपाईंले नयाँ किन्नु भयो भने, तपाईंले गर्नु पर्छ यसलाई स्प्यानिश आईएसओ वितरण प्रयोग गर्न कन्फिगर गर्नुहोस्। हामी यी सरल चरणहरू पालना गरेर यसो गर्नेछौं:
हामी प्रणाली प्राथमिकताहरू खोल्छौं। पूर्वनिर्धारितद्वारा, यो डकमा छ, तल्लो दायाँमा।
हामी «कीबोर्ड» सेक्सन पहुँच गर्दछौं।
किबोर्ड सेक्सन भित्र, हामी "इनपुट स्रोतहरू" ट्याबमा क्लिक गर्दछौं।
अन्तमा, हामीलाई प्रस्तुत गरिएका विकल्पहरूबाट, हामी स्पेनिश आईएसओ छान्छौं। सानो परिवर्तन भएको कारणले, यो कम्प्युटर पुनःस्टार्ट गर्न आवश्यक पर्दैन।
कसरी म्याक किबोर्डमा @ राख्ने
यो यस्तो प्रश्न हो जुन धेरै स्विचरहरूले आफैलाई सोध्छन्, जस्तो मैले आफुलाई १० बर्ष अघि सोधेको थिएँ: यदि म्याकसँग छैन भने कुञ्जी AltGrम कसरी साइन राख्छु? जवाफ यति सरल छ कि हामी बेवकूफ छौं जब यो हामीलाई दिइन्छ: कुञ्जी alt u विकल्प विन्डोजमा AltGr को जस्तै कार्य (व्यावहारिक )सँग छ। यसको हुनुको राम्रो कुरा यो हो कि हामीसँग बारको दाहिने तर्फ मात्र एउटा कुञ्जी हुँदैन, तर हामीसँग दुई कुञ्जीहरू हुन्छन्, बारको प्रत्येक पट्टि। उदाहरण को लागी, यदि हामी सोडा पिउदैछौं र ईमेल लेख्न चाहान्छौं वा कसैको नाम ट्वीटरमा केवल देब्रे हात प्रयोग गरेर, हामी राख्न सक्छौं @प्रयोगकर्ता नाम औंठी र २ औंठी वा २ औंलाले बायाँ Alt कुञ्जी थिच्दै।
साथै, यदि तपाई कहिले टाईप गर्न कक्षामा जानु भएको छ वा कसैलाई चिनेको कुरा गर्नु भएको छ भने, उनीहरूले तपाईलाई बताउनेछन कि हामीले हातको विपरित कुञ्जी प्रयोग गर्नुपर्नेछ जुन एउटा संशोधित कुञ्जी थिच्न गइरहेको छ, जस्तै बायाँ शिफ्टमा। ठूला अक्षर "P" राख्नुहोस् वा "A" क्यापिटलाइट गर्न दायाँ। यदि हामीले कुनै तेस्रो प्रतीक टाइप गर्नुपर्नेछ जुन दाहिने हातको आवश्यक छ र हामी यसलाई छिटो गर्न चाहन्छौं, हामी बायाँ Alt प्रयोग गर्न सक्छौं त्यो प्रतीक टाइप गर्न।
प्रतीकहरू y उच्चारण एक साँचो संग
मलाई थाहा छ ती व्यक्तिहरू जसले धेरै लेख्दैनन जो एक पत्र प्रविष्ट गर्न दुई कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुपर्दा पटक्कै मन पराउँदैनन्, यसलाई जतिसुकै परिमार्जन गरे पनि। यदि त्यो तपाइँको केस हो भने, तपाइँले जान्नुपर्दछ कि म्याकमा हामी आईओएसमा उपलब्ध समान प्रणाली प्रयोग गर्न सक्छौं: जब हामी आईओएसमा विशेष प्रतीक राख्न चाहन्छौं, जुन एक्सेंट वा अन्य प्रकारका अक्षरहरू हुनसक्दछ, हामीले गर्नुपर्दछ। स्वर थिच्नुहोस् र समाउनुहोस् विकल्पहरू देखा पर्दा सम्म, जस्तै «á», «à» वा «ª»। यो विकल्प म्याकमा पनि छ, यद्यपि केही फरक छ: यदि हामीले कुञ्जी थिच््यौं र समात्छौं भने, सबै उपलब्ध विकल्पहरू उनीहरूको माथिको संख्याको साथ देखाइनेछ। हामी वांछित प्रतीक छान्नका लागि स्क्रोल कुञ्जीहरू (एर्रो) प्रयोग गर्न सक्दछौं वा त्यो प्रतीकलाई सिधा प्रविष्ट गर्नका लागि हामी शीर्षमा रहेका कुनै पनि नम्बरहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं।
तपाइँसँग यस बारे कुनै शंका छ स्पेनिश किबोर्ड म्याकमा?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » स्पेनिश वा स्पेनिश आईएसओ किबोर्ड?
मलाई थाहा छ, तर भिन्नता के हो, वा कुन कुञ्जीहरू परिवर्तन हुन्छन्। के ल्याटिन अमेरिकी कुञ्जीपाटी अवस्थित छ? (पीको दाँयामा उच्चारणको साथ)
जर्ज न्यूनेज भन्यो
दूर्भाग्यवश होइन। तिनीहरूलाई विस्तारित ल्याटिन अमेरिकी स्प्यानिश किबोर्ड, जस्तै सामसु,, एचपी, डेल, आईबीएम, लेनोभो, Asus, सोनी, तोशिबा, Acer, आदि संग सीधा बनाउनु पर्छ।
जर्ज नाइजलाई जवाफ दिनुहोस्
याम (@yamilaml) भन्यो
दुई विकल्पहरू मलाई टिकिएका छन्: स्पेनिश आईएसओ र स्पेनिश मात्र, र म स्पेनिशमा मात्र धेरै पटक परिवर्तन हुन्छु। मलाई थाहा छैन कसरी मलाई मात्र स्पेनी आईएसओ मार्क गर्न दिने र दुबैलाई होईन। तिमीलाई थाहा छ?
यामलाई जवाफ दिनुहोस् (@yamilaml)
नमस्ते याम, यो अनौंठो छ किनकि तिनीहरू फरक किबोर्डहरू छन्। के तपाइँ प्रतीकलाई हिट गर्न सक्नुहुन्न - जुन तल बायाँ देखा पर्छ? यो तरिका तपाईं स्पेनिश (आईएसओ) को साथ रहनुहुन्छ।
एन्जो मोलिना भन्यो
मसँग समस्या छ म्याकमा नम्बर कुञ्जीहरू सहित म प्रतीकहरू लिन्छु उदाहरणको साथ १२ उदाहरणका लागि १२ <ººº + `-```12 3
कसले मलाई सहायता गर्न सक्छ?
Enzo molina लाई जवाफ दिनुहोस्
केवल एउटा चीज मैले सोच्न सक्छु कि तपाईंसँग प्रणाली प्राथमिकताहरूमा केही प्रकारको गलत कन्फिगरेसन छ। के बाट म कीबोर्डमा जाँच गर्छु कि तपाईसँग सबै कुरा क्रमबद्ध छ।
नमस्ते, मसँग मेरो म्याकबुक एयरमा केहि समस्याहरू छन्, इमान्दारी साथ मलाई यो राम्रोसँग कसरी प्रयोग गर्ने भनेर थाहा छैन, तिनीहरूले मलाई दिए, र उदाहरणका लागि iPhoto अनुप्रयोग ब्लक गरिएको छ किनभने यसले भन्छ कि यो मेक्सिकोको लागि उपलब्ध छैन, यस बाहेक अनुप्रयोग स्टोरमा म अनुप्रयोगहरू सामान्य रूपमा डाउनलोड गर्न सक्दिन जस्तो इन्स्टाग्राम फेसबुक स्पोटिफ टम्बलर आदि। जब म तिनीहरूलाई खोज्दछु, अन्यहरू देखा पर्छन्, मौलिकमा होइन - र iMovie मा यसले मलाई मेरो भिडियो सम्पादन गर्न यति धेरै विकल्पहरू ल्याउँदैन, कृपया मलाई मद्दत चाहिन्छ।
मार्सेलिनो VAZQUEZ भेगा भन्यो
कसरी स्पेनिशमा किबोर्ड किन्नुहोस्?
MARCELINO VAZQUEZ VEGA लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यवाद जोर्डी गिमेनेज। स्पेनी iso त्यो हो जुन तपाइँले कन्फिगरेसनमा चयन गर्नुपर्‍यो।
सुत्रीलाई जवाफ दिनुहोस्
आईएसओ अमेरिका को लागी हो
जुलियन रोमान भन्यो
म प्रश्न चिन्ह राख्न सक्दिन
जुलियन रोमानलाई जवाफ दिनुहोस्
संवेदनशील थ्रोब भन्यो
धेरै धेरै धन्यवाद, मैले अन्य लेखहरू देखेको थिएँ, तर त्यसले मेरो लागि काम गरेको थिएन। यी चरणहरू हो।
सेन्सिबलपालपीटरलाई जवाफ दिनुहोस्
समस्या समाधान भयो, मैले SPANISH मेटाउनुपर्‍यो र केवल SPANISH ISO मात्र छोड्नु पर्ने थियो…।
स्पेनिशमा कुनै नम्बर छैन। (DRAE हेर्नुहोस्)। यो अभिव्यक्ति कातालानमा प्रयोग भएको छ। स्पेनिशमा यसलाई «सिडिला» भनिन्छ।
एप्पलले युरोपमा तिर्ने करहरू आउँदा महिनाहरूमा बढ्न सक्दछन्